Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide ane zvimwe zvakakosha zvehutachiona, zvakadai seanti-oxidation, anti-kuzvimba, anti-hutachiona uye kudzivirira colitis, nezvimwe. kune nyika uye EU chiyero. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide ndiyo mhando yeoligose ine degree re polymerization (DP) ye2 ~ 12 mushure mehydrolysis, ine yakaderera vis ...
Agarose ipuraneti ine mitsara ine chimiro chakakosha itani refu yekuchinjanisa 1, 3-yakabatana β-D-galactose uye 1, 4-yakabatana 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Agarose inowanzo nyungudika mumvura painopisa kusvika pamusoro pe 90 ℃, uye inogadzira yakanaka semi-solid gel kana tembiricha ichidonha kusvika 35-40 ℃, chinova chinhu chikuru uye hwaro hwekushandisa kwakawanda. Iko hunhu hweagarose gel inowanzo kuratidzwa maererano nesimba rejeli. Iyo yakakwirira simba, zvirinani kuita kwejelisi. Yakachena agarose ndeye ...
Yakanatswa Carrageenan Fujian Global Ocean kappa carrageenan inonyanya kugadzirirwa kubva kune tsvuku algae - Eucheuma, kubva ku ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulfate uye β (1-4) 3,6-kupera mvura-mvura D chikamu chakasarudzika sulphate boka rakaumbwa ye lactose. Chigadzirwa chakagadziriswa nesainzi uye mhando yechigadzirwa ichi chinoenderana zvizere neChinese yenyika uye EU zviyero. Makemikari hunhu ● Solubility: insoluble mumvura inotonhorera, asi inogona kuzvimba kuita bhuru reglue, isingasviki mune organic solvents, eas ...
Fujian Global Ocean kappa carrageenan inonyanya kugadzirirwa kubva kutsvuku algae - Eucheuma, kubva ɑ (1-3) -D-galactose-4-sulphate uye β (1-4) 3,6-kupera mvura mumuviri-D hafu Chikamu chakasarudzika sulphate boka rakaumbwa re lactose . Chigadzirwa chakagadziriswa nesainzi uye mhando yechigadzirwa ichi chinoenderana zvizere neChinese yenyika uye EU zviyero. Makemikari hunhu ● Solubility: insoluble mumvura inotonhorera, asi inogona kuzvimba kuita bhuru reglue, isingasviki mune organic solvents, nyore kusungunuka mune inopisa w ...